Izigaba ezisuka ku-Linux
Kusuka kuLinux yibhulogi yakho yamanje lapho uzothola khona konke okuphathelene nomhlaba weLinux. Ngaphezu kwalokho, njengoba kungenzeka ukuthi uthole egameni layo, uzothola ama-tutorials, amabhukwana namathiphu ukuze ukwazi ukwenza noma yimuphi umsebenzi kusuka ku-Linux, okuzokusiza ukuthi ukhohlwe ngezinye izinhlelo zokusebenza, ikakhulukazi uma uyi "switcher".
Ngoba iGoogle ithathe isinqumo sokusungula isistimu yayo yokusebenza yeselula kuLinux, le bhulogi futhi inolwazi oluhlobene nomhlaba we-Android. Izindaba ezishicilelwe kuLinux futhi ziqoqa imininingwane ehlobene nabantu abavelele kwiLinux, okugqame phakathi kwabo uLinus Torvalds, owadala, wakha futhi wagcina i-kernel yalo lonke uhlelo lwe-Linux.
Phakathi kwezicelo esixoxa ngazo kule bhulogi sine-design, izinhlelo, izinhlelo zokusebenza zemultimedia noma, vele, imidlalo. Uhlu lwezigaba Ezivela ku-Linux ngezansi. Okwethu ithimba lokuhlela unesibopho sokuzigcina zibuyekezwa nsuku zonke.
Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso
Amanethiwekhi / Amaseva
Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko